Raharaha “Fenoarivo Atsinanana”: takin’ ireo inspektera ny hanafainganana ny fanadihadiana | NewsMada
Raharaha “Fenoarivo Atsinanana”: takin’ ireo inspektera ny hanafainganana ny fanadihadiana
Tsy nahantaty intsony fa nivoaka tamin’ny fahanginany ny fikambanan’ny polisy inspekitera sy ireo vadina inspekitera, ny fianankavian’ ireo telo lahy novonoina tamin’ny fomba feno habibiana, ny 24 oktobra teo, tao amin’ny fokontany Ambodihazinina Fenoarivo atsinanana.
Araka ny fanambaran’ ny inspektera Rakotondrahajarizafy Andrianarivo Richard, filohan’ny fikambanan’ny inspektera, tsy hilefitra ny fikambanana manoloana ny famonoana ny naman’izy ireo. Mitaky ny fanafainganana ny fanadihadiana momban’ny raharaha mba
ahitana ny tena marina. Teo ihany koa ny fitakiana amin’ny minisiteran’ny filaminana anatiny sy fikambanan’ny inspektera ao Toamasina mba hanamora ny fahazoan’ireo fianakavian’ny inspketera telo lahy namoy ny ainy ireo tombontsoa sy zo tokony ho azony. Nilaza koa izy ireo fa manameloka marindrano ny fihantsiana nataon’ny kandida Fanirisoa Ernaivo ireo polisy inspektera miasa ao Toamasina